Akanakisa Mabhuku eAsia Akambove | Zvazvino Zvinyorwa
La asian mabhuku yakagara ichionekwa nevaverengi nevatsoropodzi seyakajeka uye isinganzwisisike. Hunhu hwekunze hwakabatana nekufunga kweMadokero kuti tsamba dzekuMabvazuva dzakatora nguva yakareba kuti dzisvike. Kubva kuIndia, China kana Japan, izvi akanakisa mabhuku easia nguva dzose vanovanza nyaya dzinonakidza idzo, zvakare, dzinotibvumira kuziva humbowo hweimwe nyika netsika yayo.
1 Akanakisa Mabhuku eAsia Akambove
1.1 Mwari Wezvinhu zvidiki, naArundhati Roy
1.2 Rota muRed Pavilion, naCao Xueqin
1.3 Husiku hweArabia
1.4 Vanakomana vepakati pehusiku, naSalman Rushdie
1.5 Tokio Blues, naHaruki Murakami
1.6 Unyanzvi hweHondo, naSun Tzu
1.7 Iyo Lucky Star Kirabhu naAmy Tan
1.8 Chando Chando naJukio Mishima
1.9 Nyika Yakanaka, naPearl S. Buck
1.10 Vakauraya baba vangu kutanga, kubva kuLoung Ung
Mwari Wezvinhu zvidiki, naArundhati Roy
Kumaodzanyemba kweIndia, kune nzvimbo inonzi Kerala inoumbwa nemazana emichindwe uye migero yakakomberedzwa nezvikepe zvekare zvemupunga panotsengwa nyaya dzemashiripiti. Kubva kuSyria mavambo, munyori weIndia Arundhati Roy ndiye aive nebasa rekubhadhara mutero kune ino nyika naMwari weZvinhu zvidiki, runyorwa rwakaburitswa muna 1997 iro raakakunda rine mbiri mubairo mubairo. Mumapeji ese, chimiro chemunyori chemadimikira chinotipinza munhau yemapatya maviri akapatsanurwa nenjodzi yakaitika muna 1963, kwete pasina kwechokwadi kwemashiripiti uye nemhedzisiro inoshamisa.
Rota muRed Pavilion, naCao Xueqin
Inofungidzirwa seimwe ye ounyanzvi hwezvinyorwa zveChina, Ini ndinorota ndiri mutsvuku pavilion Yakanga yakanyorwa pakati pezana ramakore rechiXNUMX naCao Xueqin, nhengo yeimba yeQing. Iri bhuku rinopa humbowo hwakanakisa yenguva kuburikidza nemaonero emunyori evakadzi vakaumba hupenyu hwake, iro rehutongi hwevanhu vechiChinese panguva iyoyo uye, nekudaro, kusimuka nekudonha kwehumwe humambo. Yese yakasarudzika.
Hapana aiziva kuti vanyori vapi vakavanyora, asi chokwadi ndechekuti pakasvika chiuru chimwe neusiku humwe kumadokero muzana ramakore rechiXNUMX, hapana chinhu chakafanana zvakare. Nyika yakakundwa nenyaya idzodzo dzedzimashiripiti makapeti, mavara ane mabhezari kana njere dzakakiiwa mumwenje dzakarongedzwa nehunyanzvi hwe Scheherazade, musikana uyo husiku hwoga hwoga aiudza sultani nyaya nyowani kuitira kuti asacheke musoro wake. Kuuya kubva kunyika senge India, Siria kana kunyanya Persia, Husiku hweArabia vanotitakura kuenda kuEast yemashiripiti iyo isu tese takamborota nezvayo.
Inofungidzirwa seimwe ye vanyori vane nharo kwazvo munhoroondoSalman Rushdie, zvirinani kune vamwe vevanyanyisa vekuIran vari kungowedzera mutengo mumusoro wake mushure mekuburitswa kweThe Satanic Verses muna 1988, Salman Rushdie akazozivikanwa pasi rese mushure mekuburitswa Vana vepakati pehusiku. Basa, rechokwadi ode kune post-colonialism uye mashiripiti echokwadi, rinotaura nyaya yaSareem Sinai, akazvarwa pakati pehusiku 15 August 1947, musi uyo India yakawana rusununguko kubva kuBritain Empire. Bhuku rakakunda zvese Booker Prize uye iyo James Tait Nhema Chirangaridzo Mubayiro.
Tokio Blues, naHaruki Murakami
Kana paine mumwe munyori weAsia kukotamira, ndiMurakami. Mumiriri wekusingaperi we Mubairo weNobel muMabhuku yatisiira dzimwe dzakanakisa ngano dzechiJapan, pakati nepakati pemagineti, chakavanzika uye hukama hwepedyo hunoratidza munyori uyu. Kunyangwe mabasa ake aigona kuve akapatsanurwa kuita iwo chaiwo uye mamwe anowirirana, isu takasara Tokyo Blues, iyo ode kune vechidiki yakamisikidzwa nekapenga katete rerudo muJapan muma60s.
Mamwe mabhuku anogona kunge akaburitswa kare kare, asi hunhu hwavo hunoramba husina nguva. Iyi ndiyo mamiriro e Unyanzvi hwehondo, bhuku yakanyorwa imwe nguva muzana ramakore rechina BC naChinese nyanzvi yezvemauto Sun Tzu, uyo mukati memapeji ebhuku rino rehupenyu anoongorora mashandiro anodikanwa kumisa muvengi wako simba, anodzivirira kurwisa uye nekuzadzisa zvinangwa zvako. Kukanganiswa kwebhuku iri kwaive kwakadai zvekuti zvikoro zvebhizinesi vanoishandisa seBhaibheri chairo pavanenge vachiumba mazano avo emakambani.
Iyo Lucky Star Kirabhu naAmy Tan
La diaspora rave dingindira rinodzokororwa mumabhuku emakumi emakore apfuura. Kana iri chizvarwa chekutanga chevatorwa veChinese kuenda kuUnited States, rimwe remabhuku akanakisa Iyo yakanaka nyeredzi kirabhu, kutanga kwemunyori Amy Tan uyo wakabudirira muna 1989. Zvichibva murungano rwevabereki vake, Tan anotiudza mubhuku rino musangano wevakadzi vana vechiChinese vaive vachangosvika muSan Francisco muna 1949 uye nemasikati ekuda nyika yavaisazombodzokera.
Chando Chando naJukio Mishima
Mishima yaive imwe ye vanyori vane nharo zvikuru vezana ramakore rechiXNUMX. Mutyairi akashushikana, asinganzwisisike uye akasuruvara uyo akasvipa kunaka kwechisiko chake mumabasa ake. Asati azviuraya munaNovember 1970 zvichitevera yekare samurai rite, munyori akasiyira muparidzi wake iyo tetralogy Gungwa rekubereka, yakajeka saga yekunyora yezana ramakore rechiXNUMX Japan. Vhoriyamu yekutanga, Chando chematsutso, inyaya yerudo pakati pevakomana vaviri vevakuru vechiJapan mumwedzi mushure mekufa kwaEmperor Meiji.
Nyika Yakanaka, naPearl S. Buck
Mwanasikana wemamishinari, Buck aigara muChina kudzamara ave nemakore makumi mana, achive girazi rakatendeka retsika iri kure zvakanyanya kubva kumadokero maitiro. Nyika yakanaka, basa raakawana naro Pulitzer Mubairo muna 1932, munyori anoongorora China yezvaakarangarira kuburikidza nenhoroondo yezvizvarwa zvitatu zvemhuri yevarombo pakutanga kweChina Chimurenga. Iyo novel inotibvumidza isu kudzidza nezve kuoma uye nhamo dzevanhu vechiChinese izvo zvakatora chikamu chezana ramakumi maviri ramazana icho chaizoshandura zvachose magumo egoridhe rekumabvazuva.
Vakauraya baba vangu kutanga, kubva kuLoung Ung
Beyond India, Japan kana China, Southeast Asia uye nyika dzakaita seVietnam, Malaysia kana Cambodia vane nyaya zhinji dzekutaura. Nezve rekupedzisira, iro rinomiririra bhuku iri Vakatanga vauraya baba vangu, yakanyorwa nemumiriri weCambodian Loung Ung zvichibva paudiki hwakaratidzwa ne Utongi hwaPol Pot hwekuuraya vanhu kumusoro weKhmer Rouge. Ung's mamemoir akabata kutaridzika kwaAngelina Jolie, uyo akaita firimu adapta.
Ndeapi akanakisa mabhuku eAsia awakaverenga?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Akanakisa Mabhuku eAsia Akambove